Fahasamihafana amin'ny sakafon'ny alika: nahoana izany? | Alika Manerantany
Fahasamihafana amin'ny sakafon'ny alika: nahoana izany?
La faniriana ara-tsakafo Fahita eo amin'ny alika io, ary mety hahafaty ny vokany: matavy loatra, mitebiteby, masiaka ... Amin'ny tranga toa an'io, ny tompona ihany no mahita vahaolana, ary izany dia miankina amin'ny niandohan'ny olana. Amin'io lafiny io dia misy antony maro mety hitarika an'io karazana fihetsika io.
Ny filan'ny alika be loatra dia mety vokatry ny antony maro, anisan'izany ny fomba fiaina mipetrapetraka. Toy ny olona, ​​mila fampihetseham-batana antonony ny biby mba tsy ho sorena. Raha tsy izany dia hahatsiaro ho leo ianao ary tsy ho voatosika, ka ny sakafo dia fomba tsara hahatratrarana fahafaham-po.
Ilaina ihany koa ny fihazonantsika a fandaharam-potoana sakafo tapa-kevitra, satria raha mamahana ny biby fiompintsika isan'andro amin'ny fotoana hafa isika dia hiafara amin'ny fanakorontanana azy sy hanimbana ny vatany. Ary raha avelantsika "peck" indraindray, ilay biby dia hino fa afaka mihinana amin'ny fotoana rehetra izy. Izy io koa dia hanampy anay hizara ny sakafo isan'andro ho roa na telo, fa tsy hanome azy indray mandeha.
Ny loharano hafa iray tsara dia ny manolotra ny alika hatrany mitovy ny eritreritro, mandra-pialan'ny fahatapahany amin'ny sakafo. Ary ny tsiro vaovao ve dia afaka manamafy ny filan'ny nofo, manao izay fanahiana mitombo. Raha ny marina, raha tena matotra ilay faniriana dia tsara kokoa ny tsy avela handany fotoana be ao an-dakozia ilay alika, satria mampitombo ny faniriany hihinana ilay fofon-tsakafo.
Na dia alohan'ny hanarahana ireo torolàlana rehetra ireo aza dia ilaina ny maka ilay alika Ho an'ny veterinary, satria ny aretina sasany dia mety miteraka fitomboan'ny fahazotoan-komana tafahoatra. Ohatra, ny haavon'ny tiroidanao ambany dia miteraka io olana io, izay rehefa mandeha ny fotoana dia mety hitarika ho amin'ny faniriana mafy amin'ny sakafo. Zava-dehibe ihany koa ny fandroahana aretina hafa izay manakana ny vatanao tsy hanodina tsara ny sakafo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Fahasamihafana amin'ny sakafon'ny alika: nahoana izany?
Taranaky ny alika tsy mivily
Ny angano mistery momba ny alika mainty